SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Hausa Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malay Malayalam Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Yoruba
Ona mafambiro akaita basa rekuvaka bazi reZvapupu zvaJehovha kuBritain kubva muna September 2016 kusvika February 2017.
13 September 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Ivhu riri kuiswa murori. Ivhu iri riri kucherwa richinoiswa kune imwe nzvimbo kuitira kuti nzvimbo yacho iti sandara.
15 September 2016​—Mahofisi Anoona Nezvebasa
Vanhu vari mudhipatimendi remagetsi vari kusunga tambo dzeindaneti kuti dzisarembera. Chivako ichi ndicho chichambosanoshandiswa semahofisi uye imba yekudyira panguva ichange ichivakwa bazi.
19 September 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Apa ndipo pachange paine roundabout uye mugwagwa unoenda pabazi. Nechekuruboshwe kweroundabout kune kuri kugadzirwa nzvimbo ichange iine maruva, miti, uswa uye pond. Izvi zvichaita kuti vanhu vemunzvimbo iyi pamwe chete vashanyi vazoona kunaka kwakaita nzvimbo yacho.
3 November 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Concrete yezvivako zvaimbovapo iri kupwanywa kuti izoshandiswa pakugadzira migwagwa yepabazi.
4 November 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Vashandi vari kugadzira migwagwa, mimwe ichashandiswa kwenguva diki uye mimwe yacho icharamba ichishandiswa. Kuti migwagwa yacho inyatsosimba vanotanga vaisa chijira chinonzi geotextile membrane, chinoita kuti mvura ipfuure nepachiri ichienda pasi. Nechekurudyi kune muchina uri kutsindira mugwagwa chijira ichi chisati chaiswa.
5 November 2016​—Urongwa hwekutamisa bazi
Pane misangano 18 yakaitwa muBritain neIreland ine chekuita nebasa rekuvaka. Uyu ndiwo mumwe wacho uye vanhu vari kuudzwa mashoko ane chekuita nebasa richaitwa. Zvapupu zvinopfuura 15 000 zvakapinda misangano yacho, uye vakawanda vavo vakazvipira kuzobatsira pakuvaka.
28 November 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Vanhu vari kuisa manyowa pamuti uchangobva kusimwa. Uyu mumwe wemiti inopfuura 700 yakasimwa panzvimbo iyi. Pond iyi inoita kuti mvura painonaya zvine simba isangoerera pese pese; inochengeta mvura inenge yanaya yozoita ichibuda zvishoma nezvishoma.
5 December 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Kunze kwakanga kuine mhute, pavaipedzisa kutakura ivhu nemarori kuitira kuti nzvimbo yacho inyatsoti sandara. Ivhu rakacherwa ndokubviswa panzvimbo iyi rinosvika matani anenge 385 000. Ivhu iri rinozadza marori akaita seaya anopfuura 10 000!
6 December 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Pabazi pane nzvimbo ine maruva uye miti zvemunharaunda iyoyo. Nzvimbo iyi yakadyarwa mhando 11 dzemiti uye 16 dzemaruva. Vanhu ava vari kugadzirira kudyara heji inenge ichizochengetedza nzvimbo iyi.
19 December 2016​—Pachange paine dzimba dzekugara
Nechekurubhoshwe kune muchina uri kuchera makomba efaundesheni. Pekutanga muchina unotanga wachera gomba. Kana gomba racherwa muchina uyu unobva wadira concrete mugomba racho. Kana izvi zvaitwa, vashandi vanobva vaisa simbi muconcrete yacho kuti vapedzise kugadzira faundesheni yacho. Pane makomba anopfuura 360 akacherwa nekuiswa concrete ine simbi. Faundesheni iri kugadzirwa apa ndeyedzimba dzekugara.
29 December 2016​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Musi uyu kwaiva nechando uye mushandi aiisa pombi inofambisa mvura ichiendesa kuchivako chichashandiswa semahofisi panguva yekuvaka.
16 January 2017​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Excavator iri kubvisa marara ari mupond pabazi. Mapond akawanda ari panzvimbo iyi aitofanira kugadziridzwa. Kumucheto kwemapond aya kwakagadziridzwa uye izvi zvichaita ivhu risakukurwa nemvura uye zvichabatsirawo kuti mvura isangojenga pese pese. Hove dzinopfuura 2 500 dzakabviswa mumapond aida kugadziriswa dzichibva dzaendeswa kune mamwe mapond.
17 January 2017​—Pachange paine dzimba dzekugara
Zvakaita nzvimbo yacho kana uchiitarisa uri kumabvazuva. Faundesheni yezvivako zviviri zvichange zviine dzimba ichigadzirwa. Kurudyi kuri kuratidzwa simbi dzakaiswa mufaundesheni. Kuruboshwe kuri kuratidzwa concrete yakadirwa mufaundesheni. Pakati pane muchina uri kuchera makomba achazoiswa simbi dzefaundesheni.
23 January 2017​—Mahofisi Anoona Nezvebasa
Mukadzi ari kunama doorframe repaNzvimbo Inosvikira Vaenzi achigadzirira kuzoripenda. Muchivako ichi vashanyi vachaona marongerwo akaitwa basa rekuvakwa kwebazi uye vanokwanisawo kuona vari nechepamusoro kuti basa racho riri kufamba sei.
14 February 2017​—Pachange paine dzimba dzekugara
Muchina unoita kuti crane ikwanise kutenderera uri kusimudzwa. Crane iyi yakareba mamita anenge 40 uye inogona kusimudza matani 16.
15 February 2017​—Pachange paine dzimba dzekugara
Munhu ari kucheka concrete kuitira kuti simbi dzinyatsosvika pari kudiwa. Simbi idzi dzinozovharwa panodirwa concrete inenge yakasimba chaizvo.
17 February 2017​—Nzvimbo Iri kuvakwa bazi
Vashandi vanoita zvemagetsi vachiisa chikwangwani chakanzi JW.ORG pagedhi rebazi.
Izvi ndizvo zvaita Roundabout iri mumugwagwa unopfuura nepagedhi rebazi. Mugwagwa uyu unofamba nemotokari dzakawanda. Kuruboshwe kune zvikwangwani zveJW.ORG zviri kuratidza kuti pane bazi reZvapupu zvaJehovha. Kana pond yapera kuvakwa uye miti, maruva neuswa zvapera kudyarwa, zvichaita kuti pagedhi apa payevedze.
24 February 2017—Pachange paine dzimba dzekugara
Crane iyi inogona kusimudza zvinhu zvinenge zviri kure nemamita 65 kubva painenge yakamiswa. Kana yakamira panzvimbo yayo, inogona kusimudza chero chinhu chinenge chiri munzvimbo ichavakwa zvivako 4 zvekugara. Vashandi vari kudira concrete panzvimbo ichazopakwa motokari uye pamusoro penzvimbo yekupaka motokari pachavakwa dzimba dzekugara. Patoiswa simbi dzichashandiswa pakuvaka kuitira kuti chivako chacho chisimbe.
Chikamu 4 Chemapikicha ekuBritain (March-August 2017)